Wararka - Hababka dayactirka muraayadaha indhaha
Kadib iibsashada muraayadaha indhaha, waxaa jira kuwa dhif ah oo fiiro gaar ah u leh dayactirka muraayadaha indhaha. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay u maleynayaan inaan xirto kaliya xagaagan, dad badana waxay u maleynayaan inay iibsadaan muraayadaha indhaha oo kaliya si looga ilaaliyo shucaaca iyo moodada. Sida muraayadaha kale, ma tixgelin doonaan. Xaqiiqdii, haddii muraayadaha qorraxda Inta badan waa qashin, shaqaduna way daciifin doontaa waqti ka dib. Kaliya ma awoodi doonto inay iska caabbiso falaadhaha 'ultraviolet rays', waxay sidoo kale sababi kartaa dhibaatooyinka caafimaadka indhahaaga.
Dayactirka muraayadaha indhaha waxay kudhowaad la mid yihiin muraayadaha caadiga ah. Hadda aan eegno sida loo daryeelo muraayadaha indhaha.
1. Haddii muraayadaha indhaha ay leeyihiin nabarro, dufan ama faro, isticmaal dharka suufka jilicsan ee muraayadaha muraayadaha ee gaarka ah si aad ugu tirtirto boodhka ama wasakhda muraayada. Weligaa ha u isticmaalin ciddiyaha ama waxyaabaha ay ku jiraan waxyaabo kiimiko ah si aad uga saarto dhibcaha muraayadda
2. Markaadan xiraneyn, waa in si taxaddar leh looga saaraa oo si fiican loo tirtiraa. Markaad dhigeyso, ugu horreyn isku laabo macbudka bidix (u qaado dhinaca xirashada sida caadiga ah), u dhig muraayada wejiga, ku duub maro nadiifin muraayad ah, kuna rid boorso gaar ah. Ka taxaddar inaad ka ilaaliso muraayada iyo jirku inay xoqdo walxaha adag ama isku tuujiso waqti dheer.
3. Mamnuuca soo-gaadhista biyaha ee muddada dheer, biyo ku qoy, oo dhig meel go'an oo loogu talogalay iftiinka qoraxda; gaadhista dheer ee korantada ama biraha waa mamnuuc
4. Sidoo kale fiiro gaar ah u yeelo meelaha saliida iyo timaha jabay ay fududahay in la ururiyo, sida macbudyada iyo suufka sanka. Xusuusnow, ha ku dhaqin biyo heerkulkiisu sarreeyo ama ha dhigin meel qoyan.
5. Sidoo kale way fududahay in la qaabeeyo qaabka marka gacanta lagu qaato muraayadaha.
6. Haddii qaabku qaab daran yahay ama aan lagu raaxeysan karin inuu xirto, aad dukaanka muraayadaha indhaha si aad ugu dabaaldegto isku-hagaajinta xirfadlaha ah
Feejignaan dheeri ah ka yeelo daryeelka muraayadaha indhaha, si muraayadaha indhaha si buuxda looga ilaaliyo, muraayadaha indhahana si wanaagsan ayaa loo ilaalin karaa.